UKobo Elipsa, i-eReader entsha enobungakanani bephepha | Zonke iReaders
UJoaquin Garcia | | I-eReaders, Kobo
Kwiiveki ezininzi bekusaziwa ukuba uKobo ubesemva kokusungulwa kwesixhobo esitsha, into endiyithathe ngokwam njengesiqhelo ukusukela ngomhla woSuku lweNcwadi wawusondele.
Ukongeza, izixhobo ezinescreen sombala zisandula ukukhutshwa, endicinga ukuba ziya kuvela ezandleni zabathengisi abakhulu kwintengiso, le yiAmazon neKobo. Zonke zimanyene, uninzi (mna wokuqala) luthathe kancinci ukumiliselwa kwesixhobo esitsha nguKobo yoSuku lweeNcwadi.
Kodwa, kubonakala ngathi esi sixhobo sinokunye ukulibaziseka kwaye ekugqibeleni, kule veki sinikiwe yazi iKobo Elipsa. Esi sixhobo sahluke kancinane kwi-eReader yesiko, kuba uninzi lulujonga njengencwadi yedijithali.
I-Kobo Elipsa ime ngaphandle, i-priori, ngobukhulu bayo obukhulu, ubungakanani obungena Isikrini sayo esingu-10,3 ” leyo, njengoko usazi kakuhle, ayiqhelekanga kwimarike ye-eReader. Ubungakanani buhambelana nepoliyo kunye netekhnoloji eyisebenzisayo esi sikrini yi-E-Ink Ileta 1200 enesisombululo se-ppi engama-227.
UKobo Elipsa uza kuthengiswa ngetyala lokhuselo kunye nosiba
I-Kobo Elipsa yenza uKobo Rakuten abe yinxalenye yezo nkampani zinemveliso yomthengi wokugqibela kodwa ziyimveliso Kwishishini (intengiso apho kubonakala ngathi bangena ngakumbi nangakumbi). Ke, esi sixhobo sifuna ukuqokelela umoya we I-Sony DPT-S1 kwaye uyiqhelanise nefilosofi yeKobo ukuze abasebenzisi babe nento uninzi lwethu olucinga ukuba yincwadi yedijithali.
IKobo Elipsa ayizi yodwa kwaye iya kusasazwa kunye neKobo Stylus kunye ne-Sleepcover yesixhobo. Oko kukuthi, siya kuba nepakethi ukuze singakwazi ukufunda ii-ebook okanye iifayile ze-pdf kuphela kodwa siya kuba nencwadana yokubhalela apho sinokubhala khona izinto.
Iyandichukumisa into yokuba usiba lokubhala lufumana igama lalo. Kwaye yile Kobo Stylus (leyo ibizwa ngokuba ipensile) iyakusinceda bhala kwaye ubhale kumanani amanqaku ethu. Ukusuka kulwazi esaziyo, akukho nto ibonisa ukuba sifuna iKobo Elipsa ukuba ibhale, kodwa inokuba yimpazamo kulwazi. Ngayiphi na imeko, iKobo Elipsa kunye nokusetyenziswa kwayo kweKobo Stylus Itekhnoloji yeMyscript Ukwamkela oonobumba ababhalwe ngesandla kwaye ugcine ulwazi kwi-app entsha kwisoftware yakho ebizwa ngokuba ziiNcwadi yam yeNqaku.
Uhlaziyo lwesoftware yeKobo lweKobo Elipsa lwenza ukudibanisa ngcono inkonzo yeDropbox kunye nezixhobo zeKobo. Oku kunomdla ukugcina amanqaku ethu, ukukrwela umgca kunye nezinye iifayile esifuna ukufikelela kuzo kwisixhobo sethu, kodwa kukwabangela umdla kakhulu ekusebenziseni inkonzo yeDropbox njengogcino lweencwadi zethu.
UKobo uqala ukukhupha i-USB-C kwizixhobo zayo
Ukuzimela kwesixhobo kunikwa ngu ibhetri ye-2.400 mAh, isixa esamkelekileyo kweso sixhobo, nangona kufuneka sikhumbule ukuba isikrini si-10,3 ”ukuze ukusetyenziswa kwesiqhelo esiye sikwenze, kwesi sixhobo ukuzimela kuya kuncitshiswa.
Iprosesa iphindwe kabini kwi-1,8 Ghz. Kukhuphelo losasazo asazi kwanto malunga nomenzi, ngenxa yoko isenokungabi yiprosesa yeFreescale.
Umboniso usebenzisa Itekhnoloji yeKobo ComfortLight, into eza kunceda ukuguqula iimeko ezahlukeneyo apho sisebenzisa khona isixhobo kwaye iya kusebenzisa i-USB-C port ukunxibelelana nezinye izixhobo kunye nokutshaja ibhetri. Imodyuli ye-wifi + yeBluetooth iya kwenza ukuba uKobo Elipsa akwazi ukunxibelelana ngaphandle kwamacingo.
Uyilo lweKobo Elipsa yenye into ebambe umdla wam. Kwiimodeli ezininzi, inkampani yaseCanada izamile ukulinganisa isihlangu esinecala xa incwadi siyifunda ngesandla esinye kwizixhobo zayo. Nangona kunjalo, ngeKobo Elipsa uyilo aluqhubekeki kwaye luthatha isitayile se UKobo Aura One, isitayile ebesifunwa kakhulu ngabasebenzisi beKobo, ukuya kuthi ga kwimodeli esithetha ngayo isathengiswa kwimarike yesibini.
Ixabiso lale fowuni liphezulu kodwa alibizi. I-Kobo Elipsa inokugcinwa ukuqala namhlanje kwaye Ingathengwa nge-399,90 i-euro ukusuka nge-24 kaJuni. Kwaye ndithi ixabiso liphezulu kwaye alibizi kuba ngeli xabiso kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba sinendawo yokulala kunye nepensile ukongeza isixhobo. Ukuba sithatha ixabiso letyala kunye nosiba, kuvela ukuba ixabiso leKobo Elipsa linokuphakama kancinci kunezinye izixhobo ezinje I-Oasis yohlobo, kodwa sithetha nge-eReader enesikrini se-10,3.
Ngelishwa asikabinaso isixhobo ezandleni zethu, kodwa ngenxa yephepha lobuchwephesha, ulwazi kunye nesiqinisekiso seKobo, iKobo Elipsa ijongeka ngathi iya kuba ngaphezulu kwencwadi yokubhala yedijithali, isixhobo esiza kuthathela ingqalelo hayi kuphela abasebenzisi abathanda ii-ebook kodwa kunye neenkampani. Ngokuqinisekileyo, kusafuneka silivavanye esi sixhobo, kodwa Ijongeka intle, awucingi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » UKobo Elipsa, i-eReader entsha enobungakanani bephepha